कथा: असफल प्रेम अनी आत्महत्या | PaniPhoto
कथा: असफल प्रेम अनी आत्महत्या
Admin01 / December 5, 2017 / 1 Comment
मलाइ होस् आयो। मैले आँखा खोलेर हेर्दा म चकित भएँ। यस्तो कसरी हुन सक्छ ? म कसरी जिवित छु अझै? म डोरिमा तुर्लुङ्ग झुन्डिएको छु तर पनि म कसरी अझै मरेको छैन? अहं यस्तो हुनै सक्दैन। घाँटिमा पासो लगाएर झुन्डिएको मान्छे कसरी जिवित हुन सक्छ ? म संग प्रश्न नै प्रश्न थिए तर जवाफ एउटै थिएन। कदापी हुनै नसक्ने कुरा भएको थियो। मैले घाँटिमा कसिएको गलबन्दी फुकाएँ अनि पलङमा गएर बसेँ। म यो आश्चर्य हुनुको जवाफ खोज्दै थिएँ। त्यति नै खेर मेरा नजर पंखा भए तिर पुगे। म झनै चकित भएँ। अर्को ठूलो झट्का लाग्यो मलाइ। चक्कर आउला झैँ भएर आयो। पंखामा गलबन्दी झुन्डिएको थियो अनि गलबन्दिमा म पनि तुर्लुङ्ग झुन्डी राखेको थिएँ। म आत्तिदैँ पलङबाट उठेँ अनि झुन्डिएको मेरो आफ्नै शरिरलाइ समाउन खोजे। तर अहँ मैले आफ्नो शरिरलाइ छुन पनि सकिन। मेरा हातहरु मात्र हावामा सलबलाए। यो के हुंदैछ ? म आफ्नो शरीर झुन्डिएको देख्दैछु तर म त्यसलाइ छुन पनि सक्दिन। कस्तो अचम्म? म हार खाएर फेरि पलङमा बसें अनि सोच्न थाले। सुनेको थिएं, आत्मा र शरीर अलग कुरा हुन्। भौतिक शरीर मर्दैमा आत्मा मर्दैन र मृत शरीर संग आत्माको मिलन हुन पनि सक्दैन।अब भने मैले केही बुझें झैं लाग्यो। जिवित मात्र मेरो आत्मा थियो। मेरो शरीर त मरि सकेको थियो। म आत्मा मात्र थिएँ। सोच्दा सोच्दै बाहिर बाट आवाज आयो। “बाबू….ए बाबू… यति बेला सम्म किन उठ्दैनस् आज ?” आवाज आमाको थियो।
बाहिर बाट छिमेकी हरु “हैन के भयो” भन्दै कोठामा पस्न थाले। सबै चकित भए। आमा बुबा संगै धेरै जनाको रुवाइ अनि चिच्याहटले कोठा शोकाकुल भयो। म भुइंमा ढलेकी आमा भए ठाउँमा गएर उठाउन खोजेँ, तर अहँ मैले आमालाइ छुन सकिन। मैले कराएँ “आमा……।” मेरो आवाज कसैले सुनेन। मैले बुझेँ अब म बोल्नु ब्यर्थ छ। मलाइ कसैले देख्न अनि सुन्न सक्दैन। म त मरिसकेको छु। म हार खाएर फेरि पलङमा नै थ्याच्च बसेँ। आमाको फेरि आवाज आयो “ए मेरा छोरा….. किन यस्तो गरिस् बाबू ? हामिले माया गरेनौं तंलाइ ?…… मलाइ पहिले मारेको भए हुन्थ्यो नि बाबू।” चिच्याउदा चिच्याउदै आमाको आवाज सुकेर फेरि लड्नु भयो। छिमेकी काकिले छेउको जगको पानी टाउकोमा छेप्दै आमालाइ काखमा राख्नु भयो। बुबा पनि रुंदा रुंदै लड्न खोज्नु भयो। छिमेकिहरुले बुबालाइ सम्हाल्दै पलङमा बसाए। बुबाले रुंदै भन्नू भयो “के दशा लाग्यो यो….. छोरो ज्ञानि छ जस्तो लाग्थ्यो….. कति सपना देखेकों थिएँ।” बुबा भक्कानो छोडेर रुन थाल्नु भयो। मैले कहिल्यै मेरो बुबा रोएको देखेको थिएन। बुबा सधैँ कडक देखिनु हुन्थ्यो। ठूलो स्वरमा बोल्नु हुन्थ्यो। बुबाले फेरि भक्कानो छोडेर रुंदै भन्नू भयो “हामिले के गरेको थिएन बाबू तेरो लागि ? हामिलाइ केको सजाय दिएको यस्तो ?” हुन पनि हो, मेरा बा’आमाले मेरा लागि सबथोक गर्नु भएको थियो। आफ्नो हैसियत भन्दा धेरै गर्नु भएको थियो। सहरकै राम्रो कलेजमा पढाउनु भएको थियो। कहिले कुनै कुराको अभाव हुन दिनु भएको थिएन। बुबाले आफ्नो सन्चय कोष रित्याएर मेरो लागि मोटरसाइकल किनुदिनु भएको थियो। आमाले आफ्नो गहना बेचेर मेरो लागि ल्यापटप किन्ने पैसा दिनु भएको थियो। मेरा लागि ज्यान दिने मेरा बुबाआमालाई बिर्सिएर मैले केही महिनाको प्रेमको लागि ज्यान दिएको थिए। मलाइ आफै देखि धिक्कार लागेर आयो। म भक्कानो छोडेर रुन थालेँ। तर मेरो रुवाइ कसैले सुनेन अनि वास्ता गरेन। घरमा कोलाहल छाएको थियो। मान्छेहरु खचाखच भरिएका थिए।
मलाइ रिंगटा लाग्ला जस्तो भयो। मेरो सास रोकिन खोज्यो। मैले जस्को प्रेममा मृत्यु रोजेको थिएं उस्लाइ मेरो मृत्यु खबरले कति पनि फरक परेनछ। मलाइ मैले मृत्यु रोजेकोमा पछुतो लागेर आयो। प्रेममा पागल भएर मैले मेरा बुबाआमालाइ नै बिर्सिएर यस्तो गलत कदम उठाएको थिएँ, तीनै बुबाआमाको भने सारा खुशी छिनिएको थियो। मैले केही महिनाको प्रेमको लागि बर्षौ सम्मको प्रेमको हत्या गरेको थिएं। जसले मलाइ प्रेमको बदलामा प्रेम दिएन उस्को लागि मैले आफुलाइ भन्दा बढी प्रेम गर्ने अनि मलाइ संशार ठान्ने मेरा बुबाआमाको प्रेमलाइ लात हानेको थिए। पासो म लागेको थिएँ तर मरेको मेरो सारा परिवार थियो। म रुँदै कोठा भित्र पसेँ। मेरा बाआमा अनि आफन्तहरु डाको छोडेर रोइ राखेका थिए। रुंदा रुंदै आमाको आवाज बिलिन हुन लागेको थियो। बुबाको पनि श्वर सुकि सकेको थियो। बुबाआमा दुबैजना अर्धचेत अवस्थमा हुनुहुन्थ्यो। मलाइ असहैय्य भएर आयो। मलाइ आमालाइ बोलाउन मन लाग्यो। मैले कराएं “ए आमा… सुन्नुन…..।”
सन्तोष बस्नेतको अर्को कथा पढ्न यहाँँ क्लिक गर्नुहोस्:- बा? हजुर चाँडै मर्नुहुन्छ हो?
December 6, 2017 at 8:45 am / Reply
हैट.. सन्तोष दाजु यो कथा ले फेरी रुवायो ..
तपैले लेखेको कथा हरु जिवन्त हुन्छन पढी रहदा लेखिएका अक्षर हरु आँखा को अगाडी कुनै फिल्म जस्तै चलिरहंछा .. धन्यबाद सन्तोष दाजु
© 5908 PaniPhoto. All rights reserved.